News Missile » अक्षरमा जीवन खोज्दै रामप्रसाद
अक्षरमा जीवन खोज्दै रामप्रसाद
Thursday, August 10th, 2017 at 10:27 am By:News Missile Education & Leatrature, Highlighted News 361 Views
त्यसवेला सानो भएर पनि
आग्लो थिएँ म
मेरो उँचाई तिम्रो काँधबाट सुरु हुन्थ्यो
ठूलो भएर पनि होचो छु म
नियतिले तिम्रो काँध
मबाट खोसेपछि ..
यि हरफहरु लेखक तथा पत्रकार रामप्रसाद खरेलको कविता संग्रह अक्षरमा मान्छे पुस्तकबाट लिएको हो। पत्रकार खरेलले असारको पहिलो साता अक्षरमा मान्छे कविता संग्रह बजारमा ल्याएका हुन्। उनले कविता संग्रहमा जिवनलाई चार विधामा समेटेर पुस्तक तयार गरेका छन्।
प्रगतिशील लेखक संघ सुनसरीका अध्यक्ष समेत रहको खरेलको यो चौथो कृति हो । उनले यसभन्दा अगाडी २०७२ सालमा रेडियो पत्रकारीता, २०७० सालमा ‘रे’ (निबन्ध संग्रह) र २०६८ सालमा महानवाणी नामका पुस्तक वजारमा ल्याइसकेका छन् ।
सकारात्मक सोचका अभियन्ता समेत रहेका लेखक रामप्रसाद खरेल २०५८ सालबाट नै लेखनको सुरुवात गरेको बताउँछन्। वाल्यकालमा आमाले उ वेलाका दन्त्य कथा सुनकेसरी रानी जस्ता कथाहरु सुनाउँदा आफुलाई पनि भविश्यमा गएर पुस्तक सोचको विकास भएको उनी बताउँछन्। यसैगरी आमाले रामायण पुस्तकलाई पुजा गर्दा आफुले पुस्तकलाई लेखकलाई भगवान सम्झने गरेको र सोही अनुभवबाट पुस्तक लेख्ने सोचको विकास भएको बताए।
उमेरले ३५ वर्ष पुगेको कवि तथा पत्रकार खरेल रेडियो पुर्वोदय इटहरीका निर्देशक तथा रेस मिडिया प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक हुन। स्वर्गिय मोहनलाल खरेल र माता चन्द्रकला खरेलको कोखबाट २०४० असोज ४ गते जन्मिएका रामप्रसाद खरलले निकट भविश्यमा सकारात्मक सोच र भाषण तथा उद्घोषण कला नामका दुई पस्तक वजारमा ल्याउने तयारी समेत गरिरहेका छन् ।
लेखक तथा पत्रकार रामप्रसाद खरेलले पछिल्लो पटक प्रकाशित गरेको अक्षरमा मान्छे कविता संग्रहमा भुमिका लेख्दै ‘कवितामा आफ्नै मत, आफ्नै अभिमत’ मा यसरी अक्षरहरु निर्माण गरेका छन्:– एउटै विन्दुमा उभिएका छौं हामी दुईृ, ऊ र म, उति नै अक्षरहरु लिएर । अक्षरहरु मिलाएर मैले सुन्दर कविता बनाएँ। जुन अक्षरहरुमा मानिसका भावना, चेतना, प्रेम आदि बिम्बात्मक रुपमा देखिए। त्यहाँभित्र एउटा मानिसले आफूलाई अलिकति भए पनि भेट्छ । उसले मैले बनाएको कवितामा अक्षरहरु र मात्राहरु सब भिन्नाभिन्नै छरपस्ट पारिदियो अब कुनै पनि अक्षरमा अर्थ भेटिएन। फगत अक्षरहरुको छरपस्ट विस्कुन । ….
यसैगरी कविता यात्रामा उल्लेख गरेका छन् । जीवन आफैमा कविता हो । हरेक मानिस कवि हो। हरेक मान्छेमा कविता हुन्छ। यसरी नै कविता बिक्तैन ? कवितामा बिम्ब र प्रतिकहरुको प्रयोग ज्यादै ज्यादै जटिलता पनि पाइन्छ। अनि अन्त्यमा भनेका छन् । कविता पनि सरल हुन्छ भन्ने चेनता राखौं। अनि कसरी बिक्तैन कविता ?
कवि खरेलले लेख्नु भएको कविता संग्रह अक्षरमा मान्छेलाई डिकुरा पब्लिकेशन प्रा.लि.ले प्रकाशन गरेको हो। जुन कविता संग्रहमा कवि खरेलले गद्यमा आधारित ३४ वटा कवितालाई चारवटा विधामा समेटेका छन्। जहाँ उनले जीवन र प्रेमलाई एक आपसमा तुलना गर्दै चाहना, आशा, प्रेमको अनुभूति समेटिएको ११ वटा कविता मार्फतलाई जीवनलाई प्रेममा उतारेका छन् ।
यसैगरी जीवनमा विद्रोह पनि हुन्छ भन्ने हेक्का राखेका खरेलले ९ वटा कविता मार्फत जीवनलाई विद्रोहमा समर्पित गरेका छन् भने ६ वटा कविता मार्फत जीवनका उर्जालार्इृ प्रस्फुटन गराएका छन्। त्यसैगरी उनले मानिसको जीवनका भोगाईलाई ८ वटा कविता मार्फत आफ्नो कविता संग्रह अक्षरमा मान्छे भित्र पर्दापण गरेका छन्।
लेखेर बाच्ने दिन आयो
प्रगतिशील लेखक संघ सुनसरीका अध्यक्ष तथा अक्षरमा मान्छे कतिवा संग्रहका लेखक रामप्रसाद खरेल अब नेपालमा पनि लेखकले लेखेरै बाच्न सक्ने दिनको सुरुवात भएको बताउँछन्। उनले २०७४ असारमा प्रकाशित गरेको कविता संग्रह अक्षरमा मान्छे एक हजार भन्दा वढिप्रति बिक्री भइसकेको बताउँदै लेखक खरेलले भने –‘गुणस्तरीय पुस्तक लेख्नु पर्दछ नेपालमा नै लेखकले नेपाल सरकारको सचिव स्तरको कमाई गर्न सक्छन।’पछिल्लो समय कविता संग्रहको विक्री कम हुन्छ भनिरहेका छन् तर तपाइले त कविता संग्रह नै वजारमा ल्याउनु भयो किन ? भनेर सोध्दा लेखक खरेलले भने:–‘अहिले पाठकले गुणस्तरको खोजि गरिरहेका छन् । जहाँ गुणस्तर हुन्छ त्यहाँ जुन विधाका पुस्तक ल्याएपनि बिक्री हुन्छ ।’ तर गुणस्तरीय भएन भने जस्तोसुकै पुस्तक प्रकाशन गरेपनि त्यो प्रकाशनका लागि मात्र हुने उनको ठम्म्याई छ ।
उनी भन्छन् :–
लेख्छु हरेक अनिदा रातमा
जीवन जिउने बाध्यताको
मेरो भाषै नबुझ्ने विरानो माटामा
आफ्नो देशभन्दा धेरै पर ।।
-मणिकुमार श्रेष्ठ/सुनसरी ।